कथासँगै दृश्य पनि चोरिएको 'लभ स्टेशन'
कथासँगै दृश्य पनि चोरिएको ‘लभ स्टेशन’
प्रकाशित : शनिबार, चैत २३, २०७५१३:४०
फिल्म । पछिल्लो समय नेपाली फिल्मको ब्यापार ओरालो लाग्दो नै छ । किनकी आश गरिएका फिल्मले पनि दर्शकको चाप हलमा बढाउँन सकेका छैनन् । यस वर्षको कुरा गर्ने हो भने निकै कम फिल्मले मात्र निर्माताको लगानी सुरक्षित गरे भने एकाध फिल्मलाई ब्लकबष्टर भन्न मिल्ने अवस्था छ । यसको कारण केहि हदसम्म फिल्मले दर्शकबाट विश्वास गुमाउनु पनि हो कि ? किनकी प्रचारप्रसारको मध्यमले हलसम्म आएका दर्शक निराश बनेर फर्किएपछी हलमा ल्याउन निकै मेहनत गर्नु पर्ने हुन्छ ।
गत फागुन १७ मा प्रदर्शन गरिएको क्याप्टेन फिल्मलाई निकै आश गरिएको थियो । तर , फिल्मले नत इनिसियल रुपमा राम्रो व्यापार गर्न सक्यो नत अनमोल केसीले प्रसंसा नै बटुले । उल्टै , प्रविधिमा नेपाली फिल्म अझै निकै कम्जोर रहेको प्रतिक्रिया दर्शकबाट आयो । किनकी अनमोलको लक्षित दर्शक युथ हुन् , जसको आगमनलाई नेपाली फिल्मले कुरिरहेको छ । पछिल्लो समयका युथ स्टारहरुको फिल्मले राम्रो प्रतिक्रिया पाउँदा युवाको चाप हलमा बढ्छ भने नराम्रो प्रतिक्रिया पाउँदा उत्तिकै मात्रमा घट्छ । अनमोलपछी नाम आउने अभिनेता हुन् प्रदीप खड्का । उनका फिल्म प्रदर्शन हुदा पनि तन्नेरीको भिडभाड हमला देखिने गरेको छ ।
गत शुक्रबार चैत्र २२ देखि उनको फिल्म ‘लभ स्टेशन’ प्रदर्शनमा आएको छ । यसवर्ष आश गरिएको अर्को फिल्म हो यो । पुराना निर्देशक उज्वल घिमिरेको निर्देशन तथा प्रदीपको अभिनय साथै वितरक गोविन्द शाहीको निर्माण । यी तिनैले फिल्मलाई बुझेका छन् । तर , आश गरिएको फिल्म नै टर्किसओ दुइ फिल्मबाट चोरिएको छ । किनकी फिल्ममा प्रदर्शनको समयसम्म कहिँ कतैबाट प्रभावित भनेर मेन्सन गरिएको छैन् । त्यसो त प्रभावित वा मेन्सन एक फिल्मबाट भइन्छ , एकै फिल्ममा दुइ फिमको कथालाई मिक्स गरिएको छ ।
टर्किस फिल्म हर से अस्क्तान र सेविम्ली टेलिकेलीबाट कथा चोरिएर फिल्म तयार गरिएको छ । कथा मात्र होइन दृश्य नै चोरिएको छ । यस अगाडी नै ट्रेलरका केहि दृश्य ‘हर से अस्क्तान’ बाट हुबहु प्रभावित भएको समाचार आएपछि प्रदीपले केहि दृश्य र सिन मिल्दैमा फिल्म मिलेको भन्न नपाइने जवाफ दिएका थिए । तर अब दृश्य मात्र नभई कथा नै हुबहु मिलेपछि प्रदीप के भन्ने मानसिकतामा छन् त ? के आश गरिएका मेकरले यसरि दुइ फिल्मबाट कथा चोरेर फिल्म बनाउनु राम्रो हो ? किनकी दर्शक प्रदीपको मात्र भद्किदैनन् , यसले आउने अन्य नेपाली फिल्मलाई पनि असर गर्छ । त्यसो त उज्वलले निर्देशन गरेका फिल्मलाई चोरीको आरोप लाग्नु नौलो होइन , किनकी उनका अघिल्ला फिल्मले पनि यसकिसिमको आलोचना खेपी सकेका छन् ।
घिमिरे निर्देशित फिल्महरुमा हिन्दी फिल्म ‘प्रेम प्रतीज्ञा’बाट ‘किस्मत’, ‘होगी प्यारकी जित’बाट ‘जिन्दगानी’ र ‘जब वि मेट’बाट ‘छोडी गए पाप लाग्ला’ सारिएकोमा कसैको दुइ मत नहोला । फिल्म हेर्ने अधिकांस दर्शकलाई यसको बारेमा पत्ता लगाउन अप्ठेरो पर्दैन , किनकी यो डिजिटल युगमा केहि लुक्दैन । यस किसिमको गतिविधिले हाम्रो फिल्मनगरीलाई कहाँ लग्दैछ ? यसले दर्शक बढाउने काम गरेको छ कि भड्काउने ? प्रदीप जस्तो आश गरिएको युवास्टारबाट हामीले अपेक्षा गर्ने फिल्म यस्तै हो ? प्रदीपले अन्तर्वार्तामा दिने उदाहरणलाई फिल्मको निर्माण टिमसँग पनि छलफल गर्ने कि ?
‘छक्का पञ्जा २ को मुनाफा सामाजिक कार्यमा’ दीपाश्री
‘प्रसाद’ ट्रेलर रिलिज (भिडियो)
जब डाक्टरले भने ‘होस् गर नत्र लाइफ ड्यामेज हुन्छ’
सिक्वेलको तयारीमा विनय ?
गुनगुन सामाजिक कथा – निर्देशक भट्टराई